DaVid Becham Oo ku soo laban Dona Naadiyada England | BARTA BARTA CAYAARAHAA BARTA
← Kooxda Chelsea Oo Cashar U Dhigatay Man Utd
Punt-Land Oo Heshiis lagula Dagalamaya Burcad Badeeda La gashay England →
DaVid Becham Oo ku soo laban Dona Naadiyada England
Galkacyo: -Macalinka xulka England Fabio Capello ayaa fariin digniin ah u diray xidiga khadka dhexe ee David Beckham –taasoo ah hadii uu ka ciyaari waayo horyaalada qaarada Europe sanadka soo socda uu seegi doono ka qeybgalka ciyaaraha 2010 World Cup in South Africa.
Beckham ayaa hada wuxuu ka ciyaaraa oo uu dib ugu laabtay dalka United States gaar ahaan kooxdiisa Los Angeles Galaxy taasoo uu la joogay ilaa 2007,.
Xidigii hore ee Manchester United iyo Real Madrid ayaa dhowr bilood wuxuu deyn ugu ciyaari jiray horyaalka Italy gaar ahaan Milan , waxaana dhawaan al soo wariyay in uu jecel yahay inuu dib ugu soo laabto kooxdaais, waxeyna Rossoneri sheegtay iney gaxcmo furan kus oo dhaweyn doonto.
Capello, oo macalin ugu soo ahaa Beckham xiligii Real Madrid, ayaa ku adkeystay inuu albaabada ka xiran doono 34-sano jirkaasi hadii uusan sameyn horamar la mid ah kii sanadkii hore oo kale oo ah inuu dib ugu soo laabto horyaalada qaarada yurub si uu kor ugu qaado tayadiisa ciyaareed.
“Beckham si fiican ayuu u ogyahay hadii uusna ku soo laaban the big European championship bisha December wax fursad ah in aysan ugu furneyn ciyaaraha World Cup,” Capello ayaa sidaasi u sheegay Italian newspaper La Gazzetta dello Sport.
Beckham ayaa sidoo kale waxaa la sheegay suuragalnimada inu amah ahaan dib ugu soo laabto horyaalka England, gaar ahaan kooxaha Chelsea iyo Tottenham Hotspur, labadoodaba aad ayeey u xiiseynayaan
Comments Off on DaVid Becham Oo ku soo laban Dona Naadiyada England